Cheap 6016 aluminum alloy okpomọkụ ọgwụgwọ CNC machining akụkụ factory na suppliers | Ouzhan
6016 aluminum alloy okpomọkụ ọgwụgwọ
Kpụrụ nke alloy alloy okpomọkụ ọgwụgwọ
Ebumnuche bụ isi bụ iji melite ihe eji arụ ọrụ nke alloy ma melite nkwụsi ike. Arụrụ arụ, melite arụmọrụ nhazi, ma nweta nkwụsi ike akụkụ.
Classdị nhazi ọkwa nke nhazi alloy kwesịrị ekwesị maka ọgwụgwọ okpomọkụ:
Aluminom alloys nwere ike gbanwee maka ike, formability, na ndị ọzọ Njirimara site oyi na-arụ ọrụ, quenching, ịka nká, na annealing ụzọ. Dị ka usoro ọrụ dị otú ahụ iji nweta ihe ndị a chọrọ, a na-akpọ ọrụ a ọgwụgwọ tempering, na nhazi nke iwe a na-akpọ ụdị iwe. N'ikwu okwu n'ozuzu, aluminium deformable ihe na-Olee ihe enyemaka kewara abụọ edemede: ndị na-abụghị okpomọkụ ọgwụgwọ ụdị na okpomọkụ omume ụdị: ọcha aluminom (1000 usoro), Al-Mn usoro alloy (3000 usoro), Al-Si usoro alloy (4000 usoro) na Al-Mg Series alloys (5000 usoro) ndị na-abụghị kwes alloys; Al-Cu-Mg usoro alloys (2000 usoro), Al-Mg-Si usoro alloys (6000 usoro) na Al-Z n-Mg usoro alloys (7000 usoro) nke Okpomọkụ-emeso alloy.
Ouzhan ahaziri aluminum alloy machining akụkụ ngwaahịa ngosi
Gịnị bụ mmetụta nke aluminum alloy okpomọkụ ọgwụgwọ?
6063 alloy alloy nwere ezigbo thermoplasticity, nguzogide corrosion magburu onwe ya, yana ọ dị mfe ịmegharị, n'ihi ya, a na-ejikarị ya na mmepụta nke profaịlụ ụlọ ọrụ, profaịlụ ụlọ na ihe ọkụkụ eletriki. Dabere na gburugburu ngwa nke ihe, enwere nnukwu ọdịiche na arụmọrụ arụmọrụ ngwaahịa. Dịka ọmụmaatụ, ngwaahịa ndị arụmọrụ dị elu ejiri na sistemụ eletrọniki nwere usoro ihe dị elu nwere ihe ndị dị elu maka nkwụsi ike nke ihe ndị ahụ, yana profaịlụ ụkpụrụ ụlọ eji rụọ ụlọ mgbidi dị elu bụ plasticity na ike chọrọ nke ihe ndị siri ike, nke na-eme ka ọ dị mkpa kacha mkpa iji mepụta ngwa ọrụ aluminom dị elu. N'ime usoro nyocha na mmepe nke alloys dị otú ahụ, a na-eji usoro ọgwụgwọ ọkụ eme ihe n'ọtụtụ ebe iji nweta usoro na njirimara dị mma.
Ihe onwunwe Aluminom alloy
Ndidi +/- 0.01mm
Ọgwụgwọ ihu Usoro ọgwụgwọ nkịtị maka alloys alloys gụnyere chromization, eserese, electroplating, anodizing, na electrophoresis. N’etiti ha, usoro ọgwụgwọ gụnyere ịbịaru waya, ịkpụchasị, ikpochapu aja na nchacha.
Main usoro Nmeju ihe ndi ozo; Advection extrusion ogbo; Turbulent extrusion ogbo.
Njikwa mma Jighi oke njikwa na usoro dum nke ichikota igwe igwe site na ihe rue nkwakọ ngwaahịa.
Ojiji Aerospace, ụgbọ mmiri, ihe owuwu, igwe radiator, njem, nhazi akụrụngwa akụrụngwa, akụrụngwa ọgwụ na mkpa kwa ụbọchị.
Omenala Eserese Nabata CAD akpaka, JPEG, PDF, STP, IGS na ọtụtụ faịlụ faịlụ ndị ọzọ.
Nke gara aga: Aluminom profaịlụ extrusion akụkụ
Osote: Aluminom alloy radiator extruded akụkụ